Waxaynu wax badan maqalay in diyaaradaha iyo maraakiibta laga leexiyo wixii gala sadex xagalkaana aan dib loo arag ma run baa? Sadex xagalka Bermuuda wuxuu ka bilaabmaa meel 12 mayl koonfur bari ka xiga magaalada Miami ee dalka Maraykanka, xagasha labaad ayaa iyana ku dhamaata magaalada San Juan ee Puerto Rico, iyadoo xagasha sadexaadna ku joogsato jasiiradda Bermuuda.
Waxaa markii ugu horeysay bishii September 1950kii arintan Bermuda ku soo qoray wargeyska The Miami Herald oo magaalada Miami ka soo baxa nin la oran jirey Edward Jones, wuxuuna tilmaamay in agagaarka Bermuuda qatar u tahay maraakiibta iyo doonyaha. Laba sano ka dib waxaa qoraal faahfaahsan ka qoray arinta Bermuuda nin la oran jirey George Sand oo keeney liis ay ku qoran yihiin maraakiib, diyaarado iyo doonyo ay ugu war danbeysay iyagoo galay ama ku dhow Bermuuda.
laakiin qoraalada nimankaas waxaa gaashaanka ku dhiftay Profesor Larry Kusche oo ka tirsan Jaamacadda Arizona, wuxuu sheegay in baadhitaan dheer ka dib aanay u soo bixin wax uu la yaabo, Sadex xagalka Bermuuda wuxuu la mid yahay badaha kale ee aduunka ayuu yiri. Maraakiibta iyo doonyaha ku lumay waa tiro laga badbadiyey mana helin wax cadaynaya ayuu yiri Larry. Waxaa arintaa ku waafaqsan John Simmons oo sheegay in caymiska maraakiibtu aanu qiimaha caymiska ku qaaliyeyn maraakiibta maraysa sadex xagalka Bermuuda. Ilaalada xeebaha Maraykanka ayaa iyana sheegay in aan Bermuuda ka duwanayn xeebaha kale ee Maraykanka.
Magaalada Freeport ee Dalka Bahamas waxay ku taalaa badhtamaha sadex xagalka bermuuda, waxaana sanadkii la soo dhaafay booqday hal milyan oo dalxiisayaal ah, waxaana sadex xagalka Bermuuda uu shaqa u yahay oo marba dhinac uga gudba maraakiibta dalxiiska. Sadex Xagalka Bermuuda inaanu wax kasta liqin waxaa cadaysay sanadkii la soo dhaafay hay'ad la yiraahdo World Wide Fund for Nature oo soo saartay liiska 10ka meelood ee ugu qatarsan aduunka in lagu safro, kuma darin liiskaa Bermuuda.
Ugu danbayn sadex xagalka Bermuuda wuxuu la mid yahay badaha kale aduunka. Waxaase jirta bilaha Juun ila Nofembar in duufaano ka samaysmaan badda Atlaantiga, kuwaas oo soo gaadha Maraykanka, duufanadaas ayay Bermuuda la wadaagtaa wadamada Kareebiyanka iyo Maraykanka ee wax u gaar ah ma jiraan.